akanakisa sony smartphones iwe aunogona kutenga izvozvi (Chivabvu 2016)
Kuru Nhau & Ongororo Akanakisa eSony smartphones aunogona kutenga izvozvi (Chivabvu 2016)
Akanakisa eSony smartphones aunogona kutenga izvozvi (Chivabvu 2016)
Saka, iwe & apos; wafunga kutora smartphone nyowani yakanyatsogadzirwa naSony? Kunyangwe iwe & apos; uri wenguva refu mushandisi weiyo brand & apos; zvigadzirwa, kana wafunga kujoina iyo Sony brigade izvozvi, iwe & maapos; ungangodaro uchitsvaga kukurumidza kumhanyisa-pasi kwekuti ndeapi mamodheru aunofanira kufarira.
Sony iri pakati pevanogadzira zvigadzirwa zveApple handsets, uye yayo nyowani yepamusoro-tier phablet - iyo Xperia Z5 Premium - zvirokwazvo yakakwevera kutarisisa kwakawanda nekuda kwekuti iri nyika yekutanga & apos; yekutanga smartphone ine 4K kuratidzwa. Asi, chokwadika, hazvisi zvega ruoko mukambani & apos; s portfolio.
Nekudaro, heano mafoni anonyanya kufadza eSony, anowanikwa kana achangoburitswa, akarongedzwa nematengo emitengo, ayo aunofanirwa kuchengeta mupfungwa kana uchisarudza pakutenga kwako kunotevera:
Tisati tanyura mune izvo & maapos aripo, ngatitangei titarise izvo zvinouya kubva kukambani yeSony mune ramangwana rinotarisirwa. Iyo kambani yakashamisa munhu wese pagore rino & apos; s MWC, yaive yadzoka muna Kukadzi, payakazivisa nhevedzano yema smartphones - iyo Xperia X (isingafanirwe kuvhiringidzwa neWindows Foni-inotora Xperia X1 yakavhurwa makore mashoma apfuura) . Zviripachena, iyo Xperia Z mutsetse wave kuda kusiiwa, nemhando nyowani dzeX dziri kufungidzirwa uye kudzoreredzwa Sony smartphone. Iko kune matatu ezvirikuuya zvishandiso kubva kumutsara mutsva, asi isu parizvino hatina chokwadi chaizvo kuti yepamusoro-tier Xperia X Performance ichatanga. Isu tinoziva kana vaviri vatsva vepakati vari kubuda, asi:
Kunze kwevatatu, iyo XA yakanyatso kukonzera mitsipa yakawanda kutendeuka, nekuda kwemuviri wayo wakamanikana, bezel-shoma chitarisiko, ergonomics yakapfava, uye dhizaini dhizaini. Iyo foni ndeye midranger, inofambiswa neocta-core MediaTek Helio P10, ine 2 GB ye RAM, uye 16 GB yekuwedzeredzwa yemukati yekuchengetedza. Chiratidziro chayo chine 720 x 1280 pixel resolution yakatambanudzwa pamusoro payo 5-inch kuratidza, iyo inofanirwa kugadzira iyo pixel density ye 294 - isina kukwana, asi zvine mutsindo crisp.
Kune rimwe divi, vanoda ma handsets ekumusoro-soro vanogona kunge vasina kugutsikana nenyaya yekuti Sony inotaridzika kutsvinda ingori midranger, asi unogona kuitarisa neimwe nzira - it & apos; inotengeka, asi yakanaka smartphone. Munguva pfupi yataive nayo, tainzwa senge & apos; akanaka uye anoteerera, hazvo, isu & maapuro tisati tamboiisa nepakati payo uye kuyedza kamera uye hupenyu hwebhatiri, hongu.
Iyo Xperia XA inonzi ichaenda kunovhara masherufu ezvitoro musi wa10 Chikumi, saka kana iwe uri mukuvhima kwemurapi uye aren & apos; kuronga kuronga kutenga smartphone nekukurumidza sezvinobvira, pamwe mirira kusvikira iwe uchinge wasvika pakuyedza uye tarisa kuongorora kwedu pairi.
Iyo Xperia X mudziyo wepamusoro-wedanho, asi zvakadaro muchikamu chepakati. Iyo & apos; yakawanda yakatarisa-yechinyakare uye inotakura yakawanda yeSony DNA uye kuzivikanwa. Iyo magirazi misana yataive nayo pamutsetse weXperia Z yaenda - tarisira muviri wakazara wesimbi pane iyo nyowani X. Zvisinei, muhukuru chimiro uye nekunzwa, nemitsara yaro yakasimba uye yakatsanangurwa rectangular chimiro, chishandiso ichi chiyeuchidzo kune iyo Xperia Z5 & apos ; s dhizaini.
Iyo Sony Xperia X ine 5-inch inoratidzira ine 1080 x 1920 resolution, uye hexa-core Qualcomm Snapdragon 650 ichinyemwerera pasi payo hood, yakapetwa ne3 GB ye RAM. Iyo foni & apos; s yekuchengetera kwemukati ine 32 GB yenzvimbo, uye inowedzeredzwa kuburikidza ne microSD kadhi. Iyo huru kamera ine 23 MP sensor uye inobatsirwa neinofungidzira Hybrid AF - Sony & apos; s yekukurumidza-kutarisa inotarisa system. Kumberi, isu tine 13 MP snapper yeaya akanyanya kutsanangurwa maselfie. Rutivi-rwakaiswa zvigunwe zveminwe kubva kuXperia Z5 yadzoka, zvakare - hapana chinhu chitsva ipapo, chinotaridzika uye chinonzwa zvakangofanana zvakafanana (ndiko - kupindura kwakanaka).
Saka, zvirinani, iyo Xperia X inorongedza yakawanda yeiyo Hardware yeiri kuuya yepamusoro-tier Xperia X Performance, asi inoderedza pasi processor, iyo inofanirwa, netariro, kuti iipe mutengo unodhura. Zvinoenderana nemishumo, ichatumira musi wa20 Chivabvu, saka zvinogona kunge zvakakodzera kubata mweya wako kwechinguva chidiki kana ruoko urwu rukabata kufarira kwako.
Zvino zvatave neve kumusoro-uye-vanouya vabuda munzira, zvirinani izvozvi, regai maapos atarise izvo maapos aripo panguva ino. Ehezve, haazi munhu wese anoda mureza, saka isu tichaongorora zvakanakisa zvinopihwa kubva kune mashoma akasiyana ma tiers.
Izvo zvazvino zvakanakisa: Xperia Z5
( Amazon chinongedzo: $ 539.95 ) Ongorora
Iyo Sony mureza parizvino, zvinoreva kuti yakasimba kwazvo Hardware (pane Sony smartphone), uye, sezvingabvira, yakagamuchirwa chiyero pakati pehukuru hwescreen uye inobata, zvirinani zvinoenderana neyemugadziri & apos; zvavanofarira. Iyo Xperia Z5 haina kusakwana kwayo, asi zvirokwazvo inofanirwa kutariswa kana iwe wakafa wakagadzirira kuwana Sony.
Inotakura yakazara simbi muviri uye matte girazi kumashure, iyo Xperia Z5 inoratidzira 5.2-inch inoratidzira ine 1080 x 1920 resolution, iyo Snapdragon 810 SoC, 3 GB ye RAM, 32 GB yekuwedzera memory, uye yakakurumidza inomhanya-inotarisa 23 MP kamera, iyo Z5 zvirokwazvo ine chekudonhedza pamusoro. Muchokwadi, isu hatina kunzwa sekunge zvanga zvichienderana nemakwikwi & apos; s flagship yanhasi, asi izvo hazvireve kuti takazviwana zvichityisa. Yekuvimbika yeminwe yekutema, simbi inotonhorera inovaka, chiitiko chinonakidza nekamera & apos; inokurumidza Hybrid AF - iyo Z5 inogona kunge iine nguva dzayo uye kukuita kuti unzwe sekunge wakabata chimwe chakakosha pane dzimwe nguva.
( Amazon chinongedzo: $ 324.99 )
Nehunyanzvi, iyo M5 inoonekwa senge midranger, asi ichiri kutakura yakanaka inoremekedzwa Hardware - 5-inch inoratidzira ine 1080 x 1920 pixel resolution inopa yakawedzera-yakapinza pixel density ye441 ppi. Iyo foni inofambiswa neocta-core MediaTek Helio X10 SoC uye 3 GB ye RAM, zvakadaro, iyo & maapos; ayo anongo sunganidzwa ne 16 GB yekuwedzera inochengetedzwa. Sezvineiwo, makamera ayo ane maviri-ekumusoro-maseru sensors - 21.5 MP yeiyo huru snapper, uye inopfuura 13 MP yeiyo selfie cam.
Pasina kupokana yakanangana nevemagariro enhau-anoshanda vechidiki, iyo M5 inogona kuita zvimwe zvinopesana maererano nedhizaini, ine muviri wepurasitiki uye mabhezera akati kurei, asi maapos achiri mvura- uye guruva-chiratidzo (IP 68), zvinoreva kuti inogona kupona tsaona dzezuva nezuva uye kubata zvisina hanya. Performance-huchenjeri, iwe unogona kuvimba kuti Xperia & apos; s pane yakajeka UI ichave isinganetsi. Asi tarisira inorema 3D mitambo kudonhedza mamwe mafuremu.
( Amazon chinongedzo: $ 199.99 ) Ongorora
Inenge mwedzi mitanhatu yakakura kupfuura iyo M5 uye nehunyanzvi yakatangira, iwe unogona kutarisira kuwana iyo M4 Aqua pane yakanaka dhisikaundi. Ehezve, Hardware yayo inotora kunyura musimba futi. Iyo Xperia M4 Aqua inokanda 5-inch kuratidza ine yakaderera resolution ye720 x 1280, inogadzira iyo 294 ppi density - haina kukura, asi ichiri yakapinza pamagaro ekuona nguva dzose. Iyo processor ndeyeQualcomm midranger yesarudzo - iyo Snapdragon 615, pamwe chete ne2 GB ye RAM, uye iri-pabhodhi yekuchengetera ye16 GB (inowedzerwa kuburikidza neiyo microSD).
Seizvo zita rinoratidzira, iyo M4 Aqua ichiri IP 68-yakasimbiswa, zvinoreva kuti haitye mvura kana guruva, chero bedzi mapapiro ayo akavharwa uye maapos asina kunyudzwa mumvura ine gungwa ine munyu, ndokuti. Iyo Snapdragon 615 inokwanisa zvakakwana kubata mwenje Xperia UI, zvakadaro, iyo yakafanana yakaderera RAM ichaonekwa kana mushandisi achiedza kumhanyisa akawanda matabhu muInternet browser, kana juggle nemazhinji maapplication kumashure. Nekudaro, yakanaka midrange sarudzo yemushandisi anoshanda uyo anoda nhare iyo isingazogone kushandiswa, uye anogona kupona dzimwe tsaona.
Blast kubva kare: Xperia Z3
( Amazon chinongedzo: $ 292 ) Ongorora
Ichokwadi, iyo Xperia Z3 ichiri chimwe chevatinofarira Sony mureza mumakore apfuura. Uye iyo & apos; ichiri chakaringana ruoko - iyo 32-bit, quad-core Snapdragon 801 SoC uye 3 GB ye RAM inoita fantastically neSony & apos; s UI, uye foni ichiri kuwana zvigadziriso zveazvino Android OS. Yeiyo Android mureza uri wehunyanzvi 2 zvizvarwa zvekare kusvika zvino, izvo & apos; s inoremekedzeka.
Iyo Xperia Z3 zvakare mutambi akanaka musango wehupenyu hwebhatiri, nekuda kweprosesa isina simba-ine simba, isina-kupenga 1080 x 1920 resolution yepikisheni pane yayo 5.2-inch kuratidza, uye zvirokwazvo nekuda kweSony & apos; s STAMINA maitiro , iyo, kutaura chokwadi, iripo kune mamwe maXperias zvakare. Nehurombo, makamera ayo akatadza kufadza, kunyangwe paine ruremekedzo 20.7 MP resolution pane huru sensor. Izvo hazvishandisike nechero nzira, pane & apos; s chete zvirinani sarudzo kunze uko. Asi kweinenge madhora mazana matatu (kuenda mutengo wezvakapihwa zviri pamutemo Zvikamu zvisina kuvhurwa kuAmazon, unogona kuenda pasi), iyo Xperia Z3 inopa yakawanda. Ramba uchifunga kuti kana iwe ukawana Z2 pamutengo wekutenga, iwo & maapos anofanirwa kufunga zvakare - zvakafanana Hardware mune yakanyanya square-ish muviri uye IP 58 (kwete chaizvo ingress-proof) certification.
Diki kana compact
Xperia Z5 Yakabatana
( Amazon chinongedzo: $ 428.4 ) Ongorora
Ehe, iwe waiziva kuti izvi zviri kuuya. Sony ichiri chega chikuru mugadziri weApple uyo anopa ruoko runouya mudiki saizi, asi haabhadhare kana kucheka makona maererano nesimba rehardware. Iyo Sony Xperia Z5 Compact ndeye yakajairwa, mureza Xperia Z5, yakarongedzwa mune diki, epurasitiki muviri uyo uchine ine chigunwe chigunwe scanner padivi. Icho chete chinosarudzika ndechekuti RAM yayo inodonhedzwa pasi kusvika 2 GB - yerudzi rweanodzika pasi, asi kwete kubvumirana kwakanyanya.
Iyo Z5 Compact ine 4.6-inch inoratidzira ine 720 x 1280 resolution pixel, ichigadzira iyo ppi density ye319 - ingangoita kunge crisp seiyo iPhone & apos; s & ldquo; retina & rdquo; zvinoratidzwa. Iyo & apos sarudzo huru kune avo vasingashandise midhiya yakawanda kana kubhurawuza kwakawanda pane mafoni avo uye vanosarudza kutakurika panzvimbo. Iyo Hardware Hardware iripo yekuvimbisa yakanyanya kuvimbika mashandiro uye kugona kweiyo nguva iyo iri kunyatsodiwa.
Xperia Z3 Yakabatana
( Amazon chinongedzo: $ 280 ) Ongorora
Kungofanana neyakajairwa Xperia Z3, isu takanakidzwa neZ3 Compact, kunyanya kana zvasvika kune hupenyu hwebhatiri, uye ichine nzvimbo yakakosha mumoyo yedu. Zvichienzaniswa neXperia Z5 Compact, iyi ichauya neisina-simba processor, isina zvigunwe zvigunwe, isina super-inokurumidza Hybrid AF, uye isinganyanyo kushamisa 20.7 MP kamera iyo yatinayo zvakare pa Xperia Z3.
Nekudaro, nharembozha ichiri kumhanya-mhanya, inogadziridzwa kune yazvino makuru Android kuvaka - 6 Marshmallow - uye inogona kuwanikwa pamitengo yakanaka yekutengeserana mazuva ano. Zvakakodzera kufunga nezvevashandisi ve smartphone vanongoda izvo zvakakosha, asi vari kuda kubhadhara zvishoma kune iyo mhando ye Hardware iyo yaizomhanya zvisina mhosva.
Sony ine mashoma ekuwedzera-mahombe mafoni muhofisi yayo. Izvi zvinobva ku5.5-inches kusvika pamusoro pe6-inch skrini yechokwadi & ldquo; phablet & rdquo; ruzivo. Ehezve, ichi chikamu chinobatawo nyika & apos; s yekutanga 4K smartphone. Iwe unogona kunge wakanzwa nezvazvo:
4K muhomwe yako: Xperia Z5 Premium
Zvinonakidza zvakakwana, kumashure muna2014, Sony yakadada kuti kambani haina kufarira kusvetuka paQHD (1440 x 2560) resolution bandwagon, nepo vazhinji veaikwikwidza navo vese vaimhanya kuti vavake iwo makuru-dhi ekuratidzira. Zvinonzwisisika kudaro - vazhinji vachiri kubvunza kana QHD ichitomboita musiyano unooneka pane diki, 5-inch kuratidza, uye kunyanya kana zvichikosha iyo strain yekuwedzera iyo resolution inoisa pafoni & apos; s Hardware. Parizvino, zvakadaro, haina basa & apos; haina basa - 1440 x 2560 yave muyero unorwirwa nemireza yose. Sezvineiwo, zvakadaro, Sony yakasvetuka QHD zvachose, ndokuenda kunowedzera-kukunda 4K resolution pane yayo 5.5-inch Xperia Z5 Premium!
Nechomukati, iyo Z5 Premium ingori yako yenguva dzose Xperia Z5 - iyo Snapdragon 810, 3 GB ye RAM, 32 GB yekuchengeterwa yekuchengetera, yakafanana 23 MP main kamera ine yakanyanya-inokurumidza Hybrid AF, uye yakafanana 5 MP selfie cam . Iyo phablet & apos; s dhizaini iri zvakare yakafanana neyakajairwa Z5, inongogadzirwa chete, uye ine glossy kumashure, panzvimbo yematte. Ehezve, mutsauko mukuru uye nzvimbo yekutengesa yeZ5 Premium kuratidza kwayo.
Ikozvino, ine 2160 x 2840 pixel resolution yakatambanudzwa pamusoro pechidzitiro, isu & apos; isu tine ppi density ye801 - iyo & maapos; s mapenzi anopenga. Asi usanyengedzwa kufunga kuti foni inomhanya mukugadzirisa kwe4K nguva dzose. Paunenge uchitsvaga pawebhu, kana kuita chero chinhu kunze kwekutarisa mifananidzo uye vhidhiyo, nhare yacho inonyatso kupa mu1080 x 1920 pixels, uye inosimudzira iyo chifananidzo kuti ikwane iyo 4K skrini. Chete kana iwe ukavhura iyo inobata Xperia Album uye Mavhidhiyo maapplication, iwo kuratidzira anozopa mufananidzo mune yakazara yakazara 2160 x 2840 kubwinya.
Ehezve, izvi zvinoitwa kuitira kudzivirira foni kubva kushanda nguva yekuwedzera kuti upe iyo crisp resolution kana iwe uchiita chimwe chinhu chiri nyore sekutarisa email yako kana kutumira mameseji. Asi zvinoodza moyo kuti isu hatigoni & apos; kunyatso tarisa 4K YouTube mavhidhiyo pane mudziyo. Zvichida kwete 'zvakadaro', pamwe?
Iyo Xperia Z5 Premium ndiyo sarudzo yekuita kana iwe uchida kuve neyakanakisa hombe-screen smartphone pane Sony & apos; s roster yazvino, uye kana iwe uchida kodzero dzekuzvirova dzekuve nenyika & apos; s inopinza kuratidzwa muhomwe yako.
Selfie simba: Xperia C5 Ultra
( Amazon chinongedzo: $ 288.98 )
Sony & apos; s Xperia C mutsara wakatanga seiyo selfie-centric smartphone yevemagariro midhiya-inoshanda pwere, uye izvi zviri pachena neC5. Nharembozha ine 13 MP inobvambura musana wayo, uye iyo imwe kumberi kwayo - izvo & maapos, kurudyi, 13 MP selfie kamera, iine mwenje we LED kubhoot - it & apos; s kupfuura kusahadzika kuti uyu ndiye selfie-anoda & apos ; ruoko.
Iyo C5 Ultra ine hofori 6-inch inoratidzira, iyo inoita kuti ive media mutengi & apos; s chishandiso futi, uye Sony yakayedza kubhadhara iyo hombe skrini nekudzikisa chishandiso & apos; s mativi bezels pasi. Iine screen-to-body ratio ye76%, iyo Xperia C5 yakati rebei kupfuura iwe yaungatarisira kune phablet yaro calibre, zvakadaro, iyo & apos; ichiri hombe, saka kana wadhiropu yako izere neyakaonda jeans, ungangoda kufunga kaviri nezvekuwana iyi.
Padivi re Hardware, iyo 6-inch skrini ine 1080 x 1920 resolution pixel, ichigadzira crisp ppi density ye367. Iyo nhare inofambiswa ne64-bit, octa-core MediaTek MT6752 SoC uye 2 GB ye RAM, uye ine 16 GB yekuwedzeredzwa yemukati yekuchengetedza. Mune mamwe mazwi, iyo & apos haisi imba yemagetsi inozoita yakawanda app juggling kana 3D mutambo, asi nechinangwa chekugovana mifananidzo, magariro enhau-kubhurawuza, uye kuona-vhidhiyo, iyo & apos; ichaita zvakanaka.
Python Dhata Dhata uye Type Shanduko
Samsung Galaxy J7 yeAT & T (2018) Ongororo
Avo vanoshanda pamba vanogona kuchengetedza mari vachishandisa Boost Mobile & apos; s new $ 10 / $ 15 pamwedzi zvirongwa
Astropad inoshandura yako iPad kuita piritsi rekudhirowa Mac nePC
Mavhidhiyo anoratidza maitiro ekuchinja kumeso uye tarisa rako reropa pane iyo GalaxyWatch 3